တျောဝငျ Elizabeth2ဘုရငျမကွီးနဲ့ တှတေဲ့အခါ ဘာတှလေုပျသငျ့သလဲ
HomeKnowledgeတျောဝငျ Elizabeth2ဘုရငျမကွီးနဲ့ တှတေဲ့အခါ ဘာတှလေုပျသငျ့သလဲ
အင်ျဂလနျနိုငျငံရဲ့ အလှမျးမိုးဆုံးပုဂ်ဂိုလျ Elizabeth2ဘုရငျမကွီးနဲ့ တှဖေို့ဆိုတာ လူတိုငျးရတဲ့ အခှငျ့အရေး မဟုတျပါဘူး။ ဘုရငျမကွီးနဲ့ တှရေ့တဲ့ သူတှကေ တျောဝငျမိသားစုနဲ့ အတျောကို ရငျးနှီးတဲ့သူတှပေါပဲ။ တျောဝငျမိသားစုနဲ့ တှတေဲ့အခါ မဖွဈမနေ လုပျရမယျ့ အပွုအမူ စညျးကမျးတှေ မရှိပါဘူး။ လူအမြားစုကတော တျောဝငျမိသားစုနဲ့ တှတေဲ့အခါ အစဉျအလာ သတျမှတျခကျြတှကေို သိလိုကွပါတယျ။
9. ဘယျလိုအဝတျအစားကို ဝတျသှားသငျ့လဲ
အရောငျ မနုမရငျ့နဲ့ ဣန်ဒွရေတဲ့ အဝတျအစားမြိုးကို ရှေးခယျြပါ။ ဘုရငျမကွီးရဲ့ ဝတျစုံကို မလှမျးမိုးနိုငျတဲ့ အဝတျအစားဖွဈဖို့ လိုပါတယျ။ အရောငျတောကျတောကျတှေ၊ လြှပျပျေါလျောလီတာတဲ့ အဝတျအစားတှေ၊ သမားရိုးကမြဟုတျတဲ့ အဝတျအစားတှေ ဝတျဖို့ မသငျ့ပါဘူး။ ရိုးရိုးယဉျယဉျဝတျပွီး ခတျေမီတဲ့ အမူအရာနဲ့ ဘုရငျမကွီးအပျေါ လေးစားမှုကို ပွသလိုကျပါ။
ပုံမှနျဆိုရငျတော့ သငျက အခြိနျမီ သှားတတျသူပါ။ အကွီးအကဲ ပုဂ်ဂိုလျတှနေဲ့ တှမေ့ယျဆိုရငျ သငျဟာ အမွဲစောစော ရောကျသငျ့ပါတယျ။ သငျက ဘုရငျမကွီးကိုပဲ စောငျ့နလေိုကျပါ။ ဘုရငျမကွီးကတော့ သငျ့ကို မစောငျ့ပါဘူး။
7. ဘုရငျမကွီးကို ဘယျလိုချေါသငျ့လဲ
ဘုရငျမကွီးကို "The Queen " လို့ ဘယျတော့မှ မချေါပါဘူး။ "Queen Elizabeth " ဆိုတာ သူမရဲ့ဘှဲ့တျောပါ။ အဲဒီ နာမညျကို ချေါလို့မရပါဘူး။ "Your Majesty" လို့ ချေါလို့ရပါတယျ။
6. ဦးညှတျပွီး ဂါရဝပွုရမလား၊ မပွုရဘူးလား
ဦးညှတျပွီး ဂါရဝပွုတာကတော့ နိုငျငံတျော အခမျးအနားတှမှော လိုကျနာသငျ့တဲ့ နညျးတှထေဲမှာ မပါပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ခေါငျးကို အနညျးငယျ ညှတျလိုကျတာကတော့ သငျ့တျောပါတယျ။ ဘုရငျမကွီးနဲ့တှတေဲ့အခါ အမြိုးသမီးတှကေ ရိုးရာအတိုငျး ခွတေဈဖကျထုတျ ရှထေု့တျဒူးညှတျပွီး ဂါရဝပွုပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အမြိုးသားတှကေတော့ အနညျးငယျ ဦးညှတျပွီး ဂါရဝပွုကွပါတယျ။ ရိုးရိုးရှငျးရှငျးနဲ့ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ ဓလပေ့ါ။
5. ဘုရငျမကွီးနဲ့ လကျဆှဲနှုတျဆကျသငျ့လား
ဂါရဝပွုပွီးမှသာ လကျဆှဲ နှုတျဆကျပါ။ ဒါပမေယျ့ သငျ့လကျကို ဘယျတော့မှ စပွီး မကမျးပါနဲ့။ ဘုရငျမကွီးက စပွီး လကျကမျးပေးမှသာလြှငျ သငျ့လကျကို လှမျးလိုကျပါ။ လကျဆှဲနှုတျဆကျတဲ့အခါ လကျကို တငျးတငျးကပျြကပျြကွီး ကိုငျပွီး မနှုတျဆကျပါနဲ့။
4. ဘုရငျမကွီးကို ထိလို့ရလား
မရပါဘူး။ ဘုရငျမကွီးကို အမှတျတမဲ့တောငျ ထိလို့မရပါဘူး။ ဘုရငျမကွီးနဲ့ လကျဆှဲနှုတျဆကျတဲ့အခါပဲ ထိလို့ရပါတယျ။ တခွားအခြိနျမှာတော့ ဘုရငျမကွီးကို ထိလို့မရတဲ့မူဝါဒကို သသေခြောခြာ နာခံရပါတယျ။ ဘုရငျမကွီးရဲ့နောကျကပဲ လမျးလြှောကျပါ။ သငျခွလှေမျးနတေဲ့နှုနျးကို ဘုရငျမကွီး ခွလှေမျးနဲ့ ညှိပွီး လမျးလြှောကျပါ။ အမရေိကနျ သမ်မတကတျောဟောငျး Michelle Obama တဈယောကျတညျးကသာလြှငျ စညျးမဉျြးတှေ ဖကျြပွီး ဘုရငျမကွီးကို ပှဖေ့ကျနှုတျဆကျ နိုငျခဲ့တာပါ။
3. ဘုရငျမကွီးနဲ့ ပတျသကျပွီး ဘာအကွောငျးပွောမလဲ
ပွုံးပွုံးရှငျရှငျနဲ့ ဘုရငျမကွီး စကားစပွောတာကိုပဲ စောငျ့ပါ။ ဘုရငျမကွီးနဲ့ စကားပွောနတေုနျး စကားဖွတျပွောတာ၊ ပွနျပွောတာက စညျးကမျးနဲ့မသငျ့တျောပါဘူး။ ဘုရငျမကွီး ပွောနတေဲ့အခြိနျမှာ တခွားအကွောငျးအရာကို ပွောငျးပွီး မပွောသငျ့ပါဘူး။
2. ဘာတှေ မလုပျရဘူးလဲ
ကမ်ဘာကွီးရဲ့ အလှမျးမိုးဆုံး ပုဂ်ဂိုလျနဲ့တှဖေို့ သငျက ရောကျနတေယျ ဆိုပါစို့။ ဒီလို အခကျြတှကေို လုပျရငျတော့ အတျောကို ရိုငျးပတြယျလို့ သတျမှတျပါတယျ၊
- ဘုရငျမကွီးကို ကြောပေးပွီးနခွေငျး
- ဘုရငျမကွီးကို စူးစိုကျကွညျ့ခွငျး
- ဘုရငျမကွီးနှငျ့အတူ selfie ရိုကျခွငျး
- အမှတျတရ လကျမှတျထိုးပေးရနျ၊ ဓာတျပုံပေးရနျ တောငျးဆိုခွငျး
- ဘုရငျမကွီးရဲ့ရှကေ့ လမျးလြှောကျခွငျး
- ဘုရငျမကွီးမပွနျခငျ အရငျပွနျခွငျး
- ကိုယျရေးကိုယျတာနဲ့ နိုငျငံရေးနဲ့ပတျသကျတဲ့ မေးခှနျးတှေ မေးခွငျး
1. ဘာတှေ လုပျသငျ့လဲ
- လူအမြားကွီးနဲ့ ဘုရငျမကွီးကို တှဖေို့ဆိုရငျ လူတှကေို စကျဝိုငျးခွမျး ပုံသဏ်ဍာနျ ဝိုငျးလိုကျပါ။
- ဘုရငျမကွီးနဲ့တှတေဲ့အခါ သငျ့လကျထဲမှာ ဘာမှ မကိုငျထားပါနဲ့။
- ဘုရငျမကွီး ဦးဆောငျသှားရာနောကျကိုပဲ လိုကျပါ။
Elizabeth2ဘုရငျမကွီးက ဩစတေးလနြိုငျငံရဲ့ ဘုရငျမကွီးလညျး ဖွဈတယျဆိုတာ သငျသိပါသလား။
တော်ဝင် Elizabeth2ဘုရင်မကြီးနဲ့ တွေ့တဲ့အခါ ဘာတွေလုပ်သင့်သလဲ
အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့အလွှမ်းမိုးဆုံးပုဂ္ဂိုလ် Elizabeth2ဘုရင်မကြီးနဲ့ တွေ့ဖို့ဆိုတာ လူတိုင်းရတဲ့ အခွင့်အရေး မဟုတ်ပါဘူး။ ဘုရင်မကြီးနဲ့ တွေ့ရတဲ့ သူတွေက တော်ဝင်မိသားစုနဲ့ အတော်ကို ရင်းနှီးတဲ့သူတွေပါပဲ။ တော်ဝင်မိသားစုနဲ့ တွေ့တဲ့အခါ မဖြစ်မနေ လုပ်ရမယ့် အပြုအမူ စည်းကမ်းတွေ မရှိပါဘူး။ လူအများစုကတော တော်ဝင်မိသားစုနဲ့ တွေ့တဲ့အခါ အစဉ်အလာ သတ်မှတ်ချက်တွေကို သိလိုကြပါတယ်။
9. ဘယ်လိုအဝတ်အစားကို ဝတ်သွားသင့်လဲ
အရောင် မနုမရင့်နဲ့ ဣနြေ္ဒရတဲ့ အဝတ်အစားမျိုးကို ရွေးချယ်ပါ။ ဘုရင်မကြီးရဲ့ ဝတ်စုံကို မလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့ အဝတ်အစားဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်။ အရောင်တောက်တောက်တွေ၊ လျှပ်ပေါ်လော်လီတာတဲ့ အဝတ်အစားတွေ၊ သမားရိုးကျမဟုတ်တဲ့ အဝတ်အစားတွေ ဝတ်ဖို့ မသင့်ပါဘူး။ ရိုးရိုးယဉ်ယဉ်ဝတ်ပြီး ခေတ်မီတဲ့ အမူအရာနဲ့ ဘုရင်မကြီးအပေါ် လေးစားမှုကို ပြသလိုက်ပါ။
ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ သင်က အချိန်မီ သွားတတ်သူပါ။ အကြီးအကဲ ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ တွေ့မယ်ဆိုရင် သင်ဟာ အမြဲစောစော ရောက်သင့်ပါတယ်။ သင်က ဘုရင်မကြီးကိုပဲ စောင့်နေလိုက်ပါ။ ဘုရင်မကြီးကတော့ သင့်ကို မစောင့်ပါဘူး။
7. ဘုရင်မကြီးကို ဘယ်လိုခေါ်သင့်လဲ
ဘုရင်မကြီးကို "The Queen " လို့ ဘယ်တော့မှ မခေါ်ပါဘူး။ "Queen Elizabeth " ဆိုတာ သူမရဲ့ဘွဲ့တော်ပါ။ အဲဒီ နာမည်ကို ခေါ်လို့မရပါဘူး။ "Your Majesty" လို့ ခေါ်လို့ရပါတယ်။
6. ဦးညွှတ်ပြီး ဂါရဝပြုရမလား၊ မပြုရဘူးလား
ဦးညွှတ်ပြီး ဂါရဝပြုတာကတော့ နိုင်ငံတော် အခမ်းအနားတွေမှာ လိုက်နာသင့်တဲ့ နည်းတွေထဲမှာ မပါပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ခေါင်းကို အနည်းငယ် ညွတ်လိုက်တာကတော့ သင့်တော်ပါတယ်။ ဘုရင်မကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါ အမျိုးသမီးတွေက ရိုးရာအတိုင်း ခြေတစ်ဖက်ထုတ် ရှေ့ထုတ်ဒူးညွှတ်ပြီး ဂါရဝပြုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမျိုးသားတွေကတော့ အနည်းငယ် ဦးညွှတ်ပြီး ဂါရဝပြုကြပါတယ်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဓလေ့ပါ။
5. ဘုရင်မကြီးနဲ့ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်သင့်လား
ဂါရဝပြုပြီးမှသာ လက်ဆွဲ နှုတ်ဆက်ပါ။ ဒါပေမယ့် သင့်လက်ကို ဘယ်တော့မှ စပြီး မကမ်းပါနဲ့။ ဘုရင်မကြီးက စပြီး လက်ကမ်းပေးမှသာလျှင် သင့်လက်ကို လှမ်းလိုက်ပါ။ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တဲ့အခါ လက်ကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ကြီး ကိုင်ပြီး မနှုတ်ဆက်ပါနဲ့။
4. ဘုရင်မကြီးကို ထိလို့ရလား
မရပါဘူး။ ဘုရင်မကြီးကို အမှတ်တမဲ့တောင် ထိလို့မရပါဘူး။ ဘုရင်မကြီးနဲ့ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တဲ့အခါပဲ ထိလို့ရပါတယ်။ တခြားအချိန်မှာတော့ ဘုရင်မကြီးကို ထိလို့မရတဲ့မူဝါဒကို သေသေချာချာ နာခံရပါတယ်။ ဘုရင်မကြီးရဲ့နောက်ကပဲ လမ်းလျှောက်ပါ။ သင်ခြေလှမ်းနေတဲ့နှုန်းကို ဘုရင်မကြီး ခြေလှမ်းနဲ့ ညှိပြီး လမ်းလျှောက်ပါ။ အမေရိကန် သမ္မတကတော်ဟောင်း Michelle Obama တစ်ယောက်တည်းကသာလျှင် စည်းမျဉ်းတွေ ဖျက်ပြီး ဘုရင်မကြီးကို ပွေ့ဖက်နှုတ်ဆက် နိုင်ခဲ့တာပါ။
3. ဘုရင်မကြီးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာအကြောင်းပြောမလဲ
ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့ ဘုရင်မကြီး စကားစပြောတာကိုပဲ စောင့်ပါ။ ဘုရင်မကြီးနဲ့ စကားပြောနေတုန်း စကားဖြတ်ပြောတာ၊ ပြန်ပြောတာက စည်းကမ်းနဲ့မသင့်တော်ပါဘူး။ ဘုရင်မကြီး ပြောနေတဲ့အချိန်မှာ တခြားအကြောင်းအရာကို ပြောင်းပြီး မပြောသင့်ပါဘူး။
2. ဘာတွေ မလုပ်ရဘူးလဲ
ကမ္ဘာကြီးရဲ့ အလွှမ်းမိုးဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ဖို့ သင်က ရောက်နေတယ် ဆိုပါစို့။ ဒီလို အချက်တွေကို လုပ်ရင်တော့ အတော်ကို ရိုင်းပျတယ်လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်၊
- ဘုရင်မကြီးကို ကျောပေးပြီးနေခြင်း
- ဘုရင်မကြီးကို စူးစိုက်ကြည့်ခြင်း
- ဘုရင်မကြီးနှင့်အတူ selfie ရိုက်ခြင်း
- အမှတ်တရ လက်မှတ်ထိုးပေးရန်၊ ဓာတ်ပုံပေးရန် တောင်းဆိုခြင်း
- ဘုရင်မကြီးရဲ့ရှေ့က လမ်းလျှောက်ခြင်း
- ဘုရင်မကြီးမပြန်ခင် အရင်ပြန်ခြင်း
- ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနဲ့ နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ မေးခွန်းတွေ မေးခြင်း
1. ဘာတွေ လုပ်သင့်လဲ
- လူအများကြီးနဲ့ ဘုရင်မကြီးကို တွေ့ဖိုဆိုရင် လူတွေကို စက်ဝိုင်းခြမ်း ပုံသဏ္ဍာန် ဝိုင်းလိုက်ပါ။
- ဘုရင်မကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါ သင့်လက်ထဲမှာ ဘာမှ မကိုင်ထားပါနဲ့။
- ဘုရင်မကြီး ဦးဆောင်သွားရာနောက်ကိုပဲ လိုက်ပါ။
Elizabeth2ဘုရင်မကြီးက ဩစတေးလျနိုင်ငံရဲ့ ဘုရင်မကြီးလည်း ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား။